आफ्नो सौतेनी बहिनी ब,’लात्का’र गर्ने बझाङका युवकलाई फाँ,’सीको स’जाय !
काठमाडौं : आफ्नो सौतेनी बहिनीलाई ब’लात्कार गरेको भन्दै बझाङका एक युवकलाई भारतमा फाँ’सी (मृ’त्युदण्ड)को स’जाय दिइएको छ ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ जिल्लाको जाजरदेवलमा आफ्नी चार वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई ब’लात्कार गरेको आरोपमा ती युवकलाई भारतको अदालतले मृ’त्युदण्डको स’जाय सुनाएको हो ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ । चार वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई ब’लात्कार गरेको आरोपमा भारतको पिथौरागढ प्रहरीले नेपालको बझाङ घर भई हाल पि’थौरागढको जा’जरदेवल बस्दै आएका ३१
वर्षीय युवकलाई त्यहाँको अदालतले फाँ,’सीको स,’जाय सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतीय पत्रिका अमर उ’जालाका अनुसार ती पुरुष ३ अप्रिल २०२१ मा प’क्राउ परेका थिए ।
गाउँमा बुबाआमाको मृ’त्युपछि सौतेनी बहिनी दाइसँग पि’थौरागढमा बस्दै आएको बताइएको छ ।पिथौरागढको जा’जरदेवल थानाका एसआई मेघा शर्माले घटनाको जाँच गरी अदालतमा आ’रोपपत्र दर्ता गरेका थिए । प्रमाण र बयानका आधारमा आ’रोप पुष्टि भएकाले पिथौरागढ जिल्ला
न्या’यधीश डा. ज्ञानेन्द्रकुमार शर्माको एकल इ’जलासले शुक्रबार आ’रोपीलाई फाँ’सी दिएर मृ’त्युद’ण्डको स’जाय सुनाएको पत्रिकामा उल्लेख छ। उक्त स’जाय भारतीय अ’पराध द,’ण्ड सहिताको धारा ३७६ ए र बी अनुसार सुनाइएको जनाइएको